’फिर्के’ को पोस्टर सार्वजनिकFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
’फिर्के’ को पोस्टर सार्वजनिक
फिल्मी फण्डा । नेपाली चलचित्र ’फिर्के’को दुई पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । पौष १४ गतेबाट रिलिज हुने चलचित्र फिर्केलाई रवि डंगोलले निर्देशन गरेका हुन् । रवि डंगोल छ वटा नेवारी (नेपाल भाषा)का चलचित्रहरु निर्देशन गरेर तितो सत्य, जिरे खुर्सानी लगायतका टेलिसिरियलमा ’बेमान’को नामले परिचित छन् ।
सुलेमान शंकरको प्रस्तुतीमा बनेको फिल्ममा अष्ट महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन छ भने मित्र डि. गुरुङ्को सम्पादन र राम कुमार केसीको छायांकन रहेको छ । इकु नामले चर्चित सुलेमान शंकरलाई यस चलचित्रमा ईकु भन्दा फरक भूमिकामा देख्न किन्छ । यस चलचित्रको निर्माता ओमलाल गुरुङ् र राजेश श्रेष्ठ हुन् भने चलचित्रलाई अभिमन्यू निरबीले लेखेका हुन् ।
फिल्मको गीतमा बिश्व नेपाली र सुवास भुषालको संगीत रहेको छ । निर्माण टिमले यसै साता एक गीत सार्वजनिक गर्नेे बताएका छन् । फिल्ममा अर्पण थापा, सुलेमान शंकर, ऋचा शर्मा, क्रिष्टिना पौडेल, बिष्णु सापकोटा, अर्जुन गुरुङ्, उज्ज्वल भण्डारी, पुरन थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
फिल्मलाई काठमाण्डौ उपत्यकामा वितरक गोपाल कायस्थ वितरण गर्नेछन् भने मोफसलमा एफ डि कम्पनीले वितरण गर्ने भएको छ ।